Imveliso yamandla efektri - China Imveliso yamandla abavelisi, abaxhasi
Liu GezhuangTwon, Liu Cai Jian kwilali, Dacheng County, Langfang City, Hebei Provinc China
Iimveliso zokukhusela umlilo
Ukutyabeka okungaphakathi ngaphakathi kokungena umlilo kwisakhiwo sentsimbi
Ukutyabeka okungaphandle okugcina umlilo kwisakhiwo sentsimbi
Ukutyabeka okungagxothwanga okungafunekiyo komlilo kwisakhiwo sentsimbi yangaphandle
Ipeyinti engacacanga yokudibanisa umlilo yezakhiwo zensimbi zangaphakathi
Intsimbi yokubamba umlilo ebalekayo
Ubungqina bokuqhuma kwe-mastic
Iteyiphu egcina umlilo
Flexible izinto zokufaka iplagi
Izinto ezingaphili zokufaka umlilo
Ilaphu elingangenwa ngumlilo
Ilaphu elibuyisa umlilo
Iiseyile ezingangenwa ngumlilo
Umsi welaphu lekhethini eludongeni
I-sealant engangenisi umlilo
Elastic itywina engangenwa
Le mveliso luhlobo emnyama emnyama, engenasinyibilikisi (engenancasa), ukhuselo lokusingqongileyo, olungenabungozi emzimbeni womntu, ukubonakala ngokungaqhelekanga kwe-mucilage. Isetyenziswa ngokubanzi kukhuselo lwesizwe kunye neoyile, imboni yamachiza, isikhululo segesi, indawo yokugcina izinto enobungozi kunye nezinye iindawo ezinobungozi, njengetyhubhu yokubonisa okanye abasebenzi bezintambo
Isetyenziselwa ukuqhushumba-ubungqina bodwa kunye nokutywinwa. Ingasetyenziselwa ukurhangqa ucingo, ukudibanisa, intambo, umbhobho, ucingo lomhlaba, njl ukunqanda umlilo.
Izinto eziguquguqukayo zokuplaga kwezinto ezinobunzima obungenamlilo
Udongwe lomlilo lukwabizwa ngokuba yimpahla yokucoca umlilo engaxutywanga, enokwahlulwa ibhegi kunye nebhokisi. Izinto eziphathekayo zisetyenziselwa ukucoca imingxunya yeentambo kunye neentambo zokuthintela umlilo weentambo kunye neentambo ekusasazeni ukusuka kwimingxunya ukuya kumagumbi akufutshane kunye nokunciphisa ilahleko zomlilo. Inemisebenzi yokuthintela umsi, ukuthintela umlilo kunye nokuthintela uthuli. Ke ngoko, izixhobo zokuphuma zisetyenziswa kakhulu kwizityalo zamandla, amashishini amashishini kunye nezemigodi, izakhiwo eziphakamileyo, amandla okwakha iinqanawa, iposi kunye nokunxibelelana ngomnxeba, isitishi, isinyithi kunye nezinye iinkqubo zobunjineli.
Izinto ezingaphiliyo zokufaka umlilo, ezaziwa ngokuba kukucwangcisa ngokukhawuleza izinto ezingacimiyo.
Ihlala ibizwa ngokuba yimeko ekhawulezayo yokucima umlilo
Usebenzisa i-emulsion esekwe emanzini njengezinto ezisisiseko, uxhuma indawo yesicelo: ukufaka ipeyinti yokutywina isakhelo somnyango kunye neemfuno ezingqongqo zokuthintela umsi. Uhlobo lolwandiso lwesitywina sokukhusela umlilo, ukuze ufumane isiphumo sokukhusela umlilo, sebenzisa ubukhulu obumiselweyo ukumisela ukuba itywina linxibelelana nomphezulu wesiseko sombhobho ukufumana eyona nto inamandla. Imastic engaphezulu, ngaphambi kokuba iqine, inokususwa ngamanzi. I-elasticity fireproof sealant, coca ukuvulwa, kwaye ulungiselele ukufaka indawo edibeneyo ye-FS-I kufuneka isuswe inkunkuma, uthuli, amabala eoyile, iqabaka, i-wax, njl., Kwaye ihlale yomile. Elinye icandelo, elisekwe emanzini, i-acrylic acid ubungqina bokuba ngumlilo ngumsebenzi ophakamileyo kunye nokunwebeka kwetywina lokubola. Iyakwazi ukumelana nobushushu obuphezulu kunye noxinzelelo oluphezulu. Iyakwazi ukumelana neqondo lobushushu eliphezulu, ubushushu obusezantsi, ubuninzi obuphezulu, ubungakanani, uxinzelelo oluphantsi kunye noxinzelelo olubi, kunye nesantya esiphezulu. Itywina elinye lecandelo elinye, elingahlanganisiyo, elibomvu, elimnyama, itywina elimnyama, aliqinisi kwiqondo lobushushu begumbi kwaye lipapasha kubushushu obuphezulu Itywina lokudibanisa ilangatye luhlobo olutsha lwecandelo elinye lesitywina somlilo. Kwiminyaka yakutshanje, ukuze kuhlangatyezwane neemfuno zophuhliso lokwakha itekhnoloji yokonga umbane, ngokudityaniswa kunye neenzuzo zeemveliso zasekhaya nezangaphandle, yenziwe ngezinto eziphezulu zeemolekyuli.
Le mveliso ilungele ukukhusela umlilo kunye neentambo zonxibelelwano, ezibaluleke kakhulu ekupheliseni ingozi efihliweyo, ukuqinisekisa ukusebenza kwesiqhelo sokuhambisa amandla kunye neendlela zokuhambisa kunye neendlela zonxibelelwano. Iteyipu yokuzibamba enamathela kuyo eveliswe yinkampani yethu luhlobo olutsha lwemveliso egcina umlilo yamandla kunye neentambo zonxibelelwano. Inezinto eziluncedo zokwenza umlilo kunye nokusebenza okungangenwa ngumlilo, ukuzimela kunye nokusebenza. Ayisiyityhefu, ayinambitheki kwaye ayinangcoliseko ekusetyenzisweni, kwaye ayichaphazeli amandla okuphatha intambo ekusebenzeni kwentambo. Kuba iteyiphu yokuzibamba iyasetyenziselwa ukusongela umphezulu wentambo yesakhelo, xa kusenzeka umlilo, inokwenza ngokukhawuleza umaleko wekhabhoni onokumelana neoksijini kunye nokugquma kobushushu, okuthintela ngokufanelekileyo intambo ukuba ingatshi.
I-Db-a3-cd01 ibhegi egcina umlilo luhlobo olutsha lobungqina bomlilo obuxhasa ubungqina obenziwe yinkampani yakwa-Weicheng ngokwemigangatho emitsha kazwelonke ye-gb23864-2009 (izinto zokucima umlilo). Ubume be-db-a3-cd01 ibhegi egcina umlilo ifana nomqamelo omncinci, umaleko wangaphandle wenziwe ngelaphu elinyangiweyo leglasi, kwaye ngaphakathi kugcwele umxube wezinto ezingavakaliyo kunye nezongezo ezizodwa. Imveliso ayinabutyhefu, ayinambitheki, ayinamhlwa, ayimeli manzi, ayimeli ioyile, ayimelana neHygrothermal, iyangqinelana nomjikelo womkhenkce kunye neempawu ezilungileyo zokwandisa. Inokudityaniswa iphinde isetyenziswe kwakhona ngokuthanda kwayo. Inokwenziwa kwiimilo ezahlukeneyo ze-firewall kunye nocingo olungacimiyo ngokweemfuno ezahlukeneyo zabasebenzisi, kwaye inokusetyenziselwa ukufakela imingxunya efuna unyango lobungqina bomlilo. Xa udibana nomlilo, izinto ezikwiphakheji yokulinda umlilo ziyatshiswa kwaye zandiswe zenze ibhloko lobusi, lenze umaleko wokutywina oqinileyo ukufezekisa ukuthintela umlilo kunye nokugquma ubushushu, kunye nokulawula umlilo ngaphakathi kuluhlu lwasekhaya. Xa ubukhulu bokuxhoma bufikelela kwi-240mm, umda wokumelana nomlilo unokufikelela ngaphezulu kwe-180min.
Ibhodi yokutyabeka engacimi umlilo (imodeli: dc-a2-cd08)
I-dc-a2-cd08 inkqubo yokutywina engacimiyo umlilo luhlobo olutsha lwezinto ezingacimiyo ezenziwe yinkampani yethu, engenabumba, engenalo i-halogen, enokumelana nemozulu elungileyo, ukuqina komsi kunye nokuqina komoya. Isetyenziswa ngokubanzi kumandla enyukliya, kunxibelelwano ngomnxeba, isinyithi kunye nepetroli. Kungenxa yokuba ulwakhiwo lulula, ke linokugcina abasebenzi kunye nokunciphisa iindleko. Ilungele ngokukodwa ukutshintshwa kwentambo rhoqo Amalungu abalulekileyo omzimba.
I-CDDT-AA yohlobo lwe-cable retardant coating yoluhlobo olutsha lokudibanisa umlilo oluveliswe yinkampani yethu ngokwemigangatho ye-GA181-1998 yoMphathiswa Wezokhuseleko loluntu. Imveliso yenziwe ngazo zonke iintlobo ze-fire-retardant, i-plasticizer njalo njalo. Le yintambo ehambele phambili yamanzi kunye nombane elizweni.Le mveliso inokuvelisa ukufuma kunye nokuxinana kwesiponji xa kushushu. Inokuthintela ngokufanelekileyo kunye nokuvimba ukusasazeka nokusasazeka kwelangatye, kwaye ikhusele iingcingo neentambo. Eyona nto iphambili kuyo yile: ukhuselo lokusingqongileyo, akukho kungcoliseka kwendalo, ukungabinetyhefu kwaye akunambitheki, akukho soyikiso kwimpilo yabasebenzi bokutyabeka. Le mveliso inempawu zokwaleka okubhityileyo, ukunamathela okuqinileyo, ubhetyebhetye obulungileyo, kunye nokugquma okuhle kunye nemisebenzi yokulwa umhlwa.
I-Dc-a1-cd04 isithintelo somlilo esingaphiliyo ikwabizwa ngokuba sisithintelo somlilo okanye ipleyiti engatshiyo yomlilo. Le bhodi yenziwe ngezinto ezahlukeneyo ezinokutsha ngokusasazwa kwezenzululwazi kunye nokucinezela. Inentsebenzo elungileyo yedangatye, ixesha elingatshiyo ngaphezulu kweeyure ezi-3 xa kuthe kwakho umlilo, amandla aphezulu oomatshini, ukungadubuli, ukumelana namanzi kunye neoyile, ukumelana nokubola kwemichiza, ukungabinetyhefu kunye nezinye izinto. Kuvavanyo lokutsha komlilo we-dc-a1-cd04 isithintelo somlilo esingaphiliyo, elonaqondo lobushushu lilungileyo yi-1000 ℃ ngaphandle kwesiphene, zonke izalathiso ziyahlangabezana neemfuno ze-gb23864-2009, kwaye ukusebenza komlilo kufikelela kumgangatho (wokungabinamandla) ochazwe kwi-GB / t2408 -2008. I-Dc-a1-cd04 isithintelo somlilo esingaphiliyo sisebenza ikakhulu kukhuseleko lomlilo kunye nokwahlula umlilo kweentambo zamanqanaba ombane ahlukeneyo xa ubeka isibiyeli okanye ibhulorho Isetyenziswa kubunjineli bekhebula bezityalo zamandla, amashishini amachiza, amashishini esinyithi kunye nentsimbi , imigodi kunye nezinye iindawo ezinamandla zentambo e-China.
Imodyuli yokumisa umlilo
I-dm-a3-cd05 imodyuli ebalekayo yomlilo yenziwe ngezinto zokwandisa umlilo ezingekho yityhefu kunye nenkqubo ekhethekileyo. Isetyenziselwa ukufakela ubungqina beengcingo, iintambo kunye nezixhobo zombane kumbane ombane, unxibelelwano, isinyithi, ipetroli kunye namanye amashishini.
I-Weicheng Fire Prevention Technology Group Co, Ltd.yinkampani yemichiza ebandakanyeka kuphuhliso kunye nemveliso yezixhobo zokulwa umlilo kunye nezinto ezinokucima umlilo ...
Iqela leTekhnoloji yoThintelo loMlilo yeWeicheng Co., Ltd.